Vagari VemuMaguta Voyambirwa Kuti Vachenjere Kubatwa neZvirwere zveCholera neTyphoid
Gurukota rinoona nezvehutano Dr David Parirenyatwa vanoti munyika matangazve dambudziko rechirwere chetyphoid necholera uye vari kutyira kuti zvirwere izvi zvinogonawo kutanga kupararira nekushaikwa kwemvura yakachena mumadhorobha.
Maguta akawanda ari kuzivisa kuti achange opa vanhu mvura kwemazuva mashoma. Sangano re Zimbabwe Doctors For Human Rights kna kuti ZDHA rayambirawo kuti veruzhinji vanofanirwa kuchenjerera kutapurirwa zvirwere zvecholera netyphoid izvi zvinonzi zvatekeshera mumadhorobha.
Dr Evan Masitara vanoshanda nesangano reZDHA vanoti zvakakosha kuti vanhu vashandise nzira dzine hutsanana kana vachishandisa mvura yemudhorobha kunyanya inobva muzvibhorani. Vanoti nzira idzi dzinosanganisira zvakadayi sekuifashaidza vasati vainwa kana kuishandisa.
Dr Masitara vanoti kana munhu achifungidzira kuti abatwa nezvirwere izvi anofanira kuenda kuna chiremba kana kuchipatara chiri pedyo naye nechimbi chimbi sezvo chikanonokerwa chinokwanisa kukonzera rufu.
Zvimwe zvinoratidza kuti munhu angange abatwa nezvirwere izvi kuchaya manyoka kusinga mire nekupisa muviri.
"Tino kurudzira kuti avo vanenge vangofungidzira kuti vabatwa nezvirwere izvi vaende kuchipatara nechimbi chimbi sezvo vanokwanisa kurasikirwa nehupenyu kana vakanonokerwa. Vamwe vanenge vane vana vacheche ngavashandise mvura yemubhodhoro yekutenga sezvo vacheche vachibatwa nezvirwere izvi zvakanyanya," Dr Masitara vaudza Studio 7.
Chirwere checholera chakambonetsa munyika chikauraya vanhu vanodarika zviuru zvishanu.